IsiJalimane, iJalimane Ngabe iJalimane yafa? - EJALIMANE
Ingabe iJalimane ifile?
« : Ngo-Ephreli 19, 2016, 04:11:06 pm »
Yilokhu isihogo akekho okubhalayo, akukho ukushintshaniswa kwemininingwane, kubonakala sengathi ukuza eJalimane akuxhunyiwe ku-inthanethi, bese kuvaliwe uze ufike eJalimane, empeleni leli germany seliphelile ngomqondo wenhlalo, mina uqobo angikwazanga ukujwayela iminyaka emibili, angizizwa nginamandla noma yini enye, ngingubani vele? Anginamuntu lapha, akukho okungenayo noma okuphumayo, noma ukufuna noma ukubuza, abantu abaningi abasebenzi, bayabuza ausbildung uma befuna umsebenzi
Ngicabanga ukuthi lobu bungxiwankulu busingenise kumalume njengegiya eliyisondo, awutholi mali noma kanjani kusuka ngemuva kwesisebenzi, manje ngezwa emsakazweni ukuthi bazokhuphula umhlalaphansi bafinyelele eminyakeni engama-70 ubudala. Kusuka ku-65 kuye ku-67, manje sinama-70, uma ngelinye ilanga besuswa, sizothatha umhlalaphansi ethuneni: O.
Kubantu abayizigidi ezingama-80.7 eJalimane, amaphesenti angama-21 njengamanje angaphezu kweminyaka yobudala engama-65. Lesi yisibalo esithandekayo, ungasho ukuthi kungani iGermany ithola ababaleki abaningi kangaka, ungathukutheli indodakazi yompristi.
Ngendlela, ngibona abantu abaningi baseTurkey abakhohliwe iTurkey, ngabe siyazithola singanakile?
IBidet ilapha bangani, umholo omncane unqunywa nguhulumeni, umholo wehora awukhuphuki ngokuya kwamandla emali njengaku-tr. Angikwazanga ukubuza, ngoba isiJalimane sami besinganele.
Re: Ngabe iJalimane ifile?
« Phendula #1: Meyi 27, 2016, 10:29:14 pm »
IJalimane ayinaso isililo esifile. okungcono kakhulu kuhulumeni, sebenza kuze kube ngama-70 futhi ufe isonto eli-1 ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi. Uma amaJalimane engabantu bezwe kakhulu abathanda izwe lakubo, ngaphandle kwalokho umuntu akakwazi ukubekezelela uhlelo olunjalo. Angazi ukuthi yiziphi izintela ezenziwa lapha, okwenziwa ezweni lethu, kuzoba nempi yombango, isizwe sizothululela ezitaladini.
« Phendula #2: Juni 01, 2016, 04:21:17 pm »
-> Uqinisile mfowethu omuhle. IGerman isebenzisa abantu futhi ithathe umhlalaphansi lapho ingasetshenziswa. Ukube bebengekho ababaleki nabokufika, iJalimane ibingagcini nje ngokuphela kepha futhi izowa. Kepha kukhona okuthile okuhle kuyo yonke imisebenzi. Inani labantu baseJalimane liba ngamaSulumane usuku nosuku. Kumele siqhubeke nokuphila ngaphandle kokufakwa. Esinye sezimpawu ze-apocalypse ukuthi izwe elilodwa lizoba ngamaSulumane ngokuphelele. Kubonakala kimi ukuthi kungaba yiJalimane noma iMelika. Yize u-ALLAH engakwenza eJapan. Kepha isimo samanje siyamkhombisa. Empeleni, angizange ngibe kulezi zindawo muva nje. Mina sengimdala kakhulu. Kepha angikhohliwe, kepha ngisakwazi ukuphefumula lapha njengoba ngicabanga ngakho. Empeleni, ngithanda ukwenza umzamo ukuze izingxoxo ezindala ziphinde zisungulwe futhi.
Ungavumeli omunye kini, obiza okuhle, ukulalela okuhle nokuvimbela okubi. Laba yibo abasindiswayo. Ir Ali Imran, 104.